Inoshanda Tafura Vagadziri & Vatengesi - China Inoshanda Tafura Tafura
TY Stainless Simbi Manual Hydraulic Kuvhiya Tafura Yekushandisa Kamuri
TY bhuku rekushandisa tafura inokodzera kuvhiya kwemuviri uye kwepamuviri, ENT, obstetrics uye gynecology, urology uye orthopedics, nezvimwe.
Iyo furemu, ikholamu uye chigadziko isimbi isina tsvina, iri nyore kuchenesa uye kusagadzikana ngura.
TS-1 Stainless Simbi Mechanical Hydraulic Inoshanda Tafura yeGeneral Kuvhiya
TS-1 mechina yekushandisa tafura yakagadzirwa nesimbi isina simbi, iyo ine yakakwira michini simba, ngura kuramba uye nyore kuchenesa.
TS Chinyorwa Hydraulic Kuvhiya Kushanda Tafura yeChipatara
TS hydraulic yekuvhiya tafura inokodzera kuvhuvhuta uye mudumbu kuvhiya, ENT, obstetrics uye gynecology, urology uye orthopedics, nezvimwe.
TF Hydraulic uye Chinyorwa Chekuvhiya Gynecology Kushanda Tafura
TF Hydraulic gynecology oparesheni tafura, muviri, mbiru uye hwaro zvese zvakagadzirwa nesimbi isina chinhu, ine yakakwira michini simba, ngura kuramba, uye inobatsira pakuchenesa uye disinfection.
Iyi hydraulic gynecology oparesheni tafura inouya yakaenzana nezororo remapfudzi, bhanhire repafudzi, mubato, zororo remakumbo nemipendero, bheseni revhu rine strainer, uye sarudzo yekuongorora gynecological mwenje.
FD-G-2 China Magetsi Medical Kuendesa Inoshanda Tafura yeObstetrics uye Gynecology department
FD-G-2 tafura yemagadzirirwo emadzvinyu inoshandiswa zvakanyanya pakuzvara kwekubereka, kuongororwa kwevakadzi nekushanda.
Mutumbi, mukoramu uye hwaro hwetafura yekuendesa yemagetsi yakaitwa nesimbi isingaite ye304, inova isingaite ngura uye iri nyore kuchenesa.
FD-G-1 Magetsi Gynecological Medical Kuongorora Tafura yeChipatara
FD-G-1 yemagetsi gynecological tafura yekuongorora inoshandisa yakakwira-simba zvinhu uye haina kupisa ngura, inoenderana nekuchenesa kwemazuva ese uye kutapudza kwechipatara.
TDY-Y-2 Chipatara Chekuvhiya Midziyo Electro-Hydraulic Inoshanda Tafura
Iyi tafura ye electro-hydraulic yekushandisa yakakamurwa kuita zvikamu zvishanu: chikamu chemusoro, chikamu chekumashure, chikamu chemaburi, zvikamu zviviri zvemakumbo zvakaparadzaniswa.
Yakakwirira mwenje yekufambisa fiber zvinhu pamwe ne340mm yakatwasuka inotsvedza inovimbisa isina bofu nzvimbo panguva yeX-ray kuongorora.
TDY-Y-1 Multi-chinangwa Magetsi-Hydraulic Medical Inoshanda Tafura muChina
TDY-Y-1electric hydraulic tafura yekushandisa inotora yemagetsi kupinza hydraulic hutachiona chimiro, iyo inotsiva yetsika yemagetsi kusunda tsvimbo kufambisa tekinoroji.
Kugadziriswa kwechinzvimbo kwakanyatsojeka, kumhanya kwekufamba kwakanyanya yunifomu uye kugadzikana, uye iko kuita kwacho kwakavimbika uye kunogara.
TDY-G-1 Radiolucent Isina Simbi Magetsi-Hydraulic KANA Tafura yeNeurosurgery
TDY-G-1 electro-hydraulic yakasanganiswa yekushandisa tafura, ine yakaderera-yakaderera chinzvimbo, kunyanya inokodzera kuvhiya kwehuropi. Iyo inokodzerawo kuvhiyiwa kwemimba, obstetrics, gynecology, ENT, urology, anorectal uye mamwe akawanda marudzi ekuvhiya.